समाज Archives - Nagarik Today
होम » समाज
भूपेन्द्र हत्याका आरोपीलाई धरौटीमा छाडेको विरोधमा अदालतबाहिर प्रदर्शन
by नागरिक टुडे मंसिर २७, २०७८
कैलालीकाे लम्किचुहा नगरपालिका-३ का भूपेन्द्र बडुवालकाे हत्यामा संलग्न भएकाे आराेपमा पक्राउ परेकाहरूलाई धराैटीमा रिहा गरेकाे भन्दै आफन्त र परिवारजनले जिल्ला अदालतबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् ।
पीडित पक्षले साेमबार धनगढीमा प्रर्दशनसहित जिल्ला अदालत अगाडि धर्ना दिएका छन् । मान्छे मार्न पाइदैन, न्यायलय बिक्न बन्द गर, फरार अभियुक्तलाई इन्काउन्टर दे लगायतका नारा लगाएका छन् । जिल्ला अदालत अगाडि अहिले उनीहरू नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
गत कात्तिक २३ गते टीकापुरमा धारिलाे हतियार प्रहारबाट लम्कीचुहाका भूपेन्द्रको हध्या भएको थियो । हत्या आराेपमा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेकाे थियाे भने अन्य ९ जना अझै फरार छन् । उक्त मुद्दामा थुनछेक बहसपछि कैलाली जिल्ला अदालतले ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएकाे थियाे भने तीन जना धराैटीमा छुटेका थिए ।
मंसिर २७, २०७८0comment
कानूनी अज्ञानताले उजाडिएको एउटा परिवार
by नागरिक टुडे मंसिर २३, २०७८
स्याङ्जाको गाउँमा एकजोडीको बालविवाह भयो ! युवक जेल परे, छोरालाई १८ वर्ष कैद भएको सुनेर बिरामी आमा चिन्ताले बितिन् । युवक जेल परेपछि किशोरीको दोस्रो विवाह पनि सफल भएन । उनले आत्महत्या गरिन् ।
२२ मंसीर, वालिङ । ‘बिहेवारी बीस वर्ष पारि’ भनेको छ कानूनले । तर कानून पालना गर्ने धेरै जना यो मामिलामा अनभिज्ञ छन् । कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै छ । कानूनको अनभिज्ञताले परिवार उजाडिन पुगेको उदाहरण पनि भेटिएको छ ।
समुदायलाई कानूनी साक्षरता सम्बन्धी चेतना नफैलाउने हो भने समाजलाई सुव्यवस्थित गर्न बनाइएको कानूनले कस्तोसम्म विघटनको अवस्था ल्याउँछ र विषयको गम्भीरता नबुझ्दा, नियतवश कसुर नगर्दा पनि कानूनी र परिस्थितिजन्य अवस्थाले मानिसहरू जेल पुग्छन् भन्ने एउटा उदाहरण छ स्याङ्जा जिल्लाको वालिङमा ।
वालिङ बजार नजिकै माझी समुदायको बसोबास रहेको एउटा गाउँ छ । यो समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रमले एकै प्रकारका घरहरू निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय आँधीखोला र अन्य सहायक नदी तथा खोलाहरूमा माछा मार्ने पुख्र्यौली पेशा भए पनि आजभोलि यहाँका माझीहरूमध्ये धेरैले यो पेशा छाडेका छन् । ज्याला मजदूरी, मिस्त्री, कसैको घरमा सहयोगी र अरूको भारी बोक्ने जस्ता काम गरेर उनीहरूको जीविकोपार्जन भइरहेको छ ।
बिहान उठेर काममा गयो, दिनभर काम गर्‍यो । पाएको ज्यालाले घर खर्च चलायो । त्यसमा तानतुन बचाएर मदिरा पिउने पैसा निकाल्छन् उनीहरू । यसरी बिहानैदेखि साँझसम्म काममा व्यस्त हुने उनीहरू केही सामान्य साक्षर छन् भने धेरै त निरक्षर नै छन् ।
अल्पसंख्यक यो समुदायका मदन माझी अढाइ वर्षदेखि पोखरा जेलमा छन् । भनिन्छ माया-प्रेम जीवनका अभिन्न पाटा हुन् । तर यही अभिन्न भनिएको माया-प्रेमले उनलाई जेल पुर्‍याएको छ । समाजलाई सुव्यवस्थित गर्न भनेर बनाइएको कानूनको अज्ञानताले कसरी मानिस फन्दामा पर्छ भन्ने थाहा पाउन वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर ९ का यी १९ वर्षीय मदन माझीको कथा थाहा पाउनुपर्छ ।
स्थानीय आँधीखोला किनारमा फैलिएको छ वालिङ बजार । देशभर सचिव, सह-सचिवको जिल्ला भनेर चिनिने स्याङ्जा शिक्षित र पहुँचवालाहरूको जिल्ला हो । तर, बत्तीमुनि अँध्यारो भनिए झैं यही जिल्लामा त्यस्तो गाउँ पनि छ जहाँ विवाह गर्न कुनै केटी मानिसको उमेर २० वर्ष माथि हो कि हैन भन्ने थाहा पाउनुपर्छ भन्ने समेत थाहा नपाएर मानिस जेल परिरहेका छन् त्यो पनि १८ वर्ष ।
वालिङ बजारबाट आँधीखोला तरेर करीब ३० मिनेट उकालो बाटो पैदल हिंडेपछि माझीगाउँ पुग्न सकिन्छ । केही समथर र भिरालो ठाउँमा लहरै रहेका घर । एउटै समुदायका व्यक्ति बस्ने एउटै प्रकृतिका घरहरू छन् ।
दुई दिनकी पाहुना
कानूनी अज्ञानताकै कारण स्याङ्जाको यो गाउँमा बालविवाह भयो, युवक जेल परे, छोरालाई १८ वर्ष कैद सजाय भएको थाहा पाएर बिरामी आमा चिन्ताले बितिन् । युवक जेल परेपछि किशोरीले गरेको दोस्रो विवाह पनि सफल भएन । अनि उनले आत्महत्या गरिन् । यो शृंखलाले कानून निर्माता र समाजलाई एकपल्ट निधार खुम्च्याएर सोच्न बाध्य बनाउँछ
कथा यसरी शुरु हुन्छ । २ वैशाख २०७६ को कुरा हो, सदा झैं मदन मजदूरी गरेर थकित अवस्थामा साँझ घर आइपुगेका थिए । मदनका बुवाको लडेर मृत्यु भएपछि घरमा बिरामी आमाको स्याहारसुसार गर्ने काम उनको जिम्मेवारीमा थियो ।
त्यही बेला एक किशोरी -अदालतमा ‘०७६ आँधीखोला १’ उल्लेख) की सानीआमा र एक अर्की महिला सहित तीन जना मदनको घरमा आइपुग्छन् । मदनले अदालतमा दिएको बयान अनुसार, ‘उनीहरूले ती किशोरीले निकै दुःख पाएकोले मदनसँग बिहे गराइदिएर यहीं राख्नु पर्‍यो भने ।’
उनका भनाइमा, तिमी काममा जानु, ज्याला मजदूरी गर्नु र घरमा बिरामी आमाको स्याहारसुसारमा यी नानीले समय दिन्छिन् भनेर उनीहरूले भने । मैले पनि श्रीमती घरमा बसेपछि आमाको स्याहारसुसार पनि हुन्छ मैले काम गर्न जान पनि पाउँछु भन्ने सोचेर हुन्छ भनेको बयान मदनले प्रहरीमा दिएका छन् । ती बालिका दुई दिन मदनकै घरमा बसिन् ।
४ गते दिउँसो बालिकाले कपडा सिलाउन दिएको छ म लिएर आउँछु भनेर घरबाट हिंडिन् । साँझ फर्केर घर आइनन् । यसको तेस्रो दिन राति करीब ९ बजेतिर अकस्मात् प्रहरी मदनको घरमा पुग्यो । मदनलाई नियन्त्रणमा लिएर वडा प्रहरी कार्यालय वालिङ लगियो ।
भोलिपल्ट बिहान आफन्त सहित गाउँले मदनका बारेमा बुझ्न वडा प्रहरी कार्यालय वालिङ पुगे । त्यहाँ गएर बुझ्दा प्रहरीले मदनलाई ‘जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर’ मा पक्राउ गरेको बतायो । बालिकाको कुनै आफन्तले ‘जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर’ मा उजुरी दिएपछि मदनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
‘मदन बयरघारी गएको बेला मलाई जाम भनेर आएकी हुँ र हामीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध पनि भएको हो’ किशोरीले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेकी छिन् । त्यसबेला किशोरीको उमेर प्रहरीमा १३ वर्ष उल्लेख छ भने उनका बुवाका अनुसार उनी १६ वर्ष पुगेकी छिन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ को करणी सम्बन्धी कसुरको दफा २१९ (२) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
सोही कानूनको दफा (३) (ख) अनुसार १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी ठहर हुने र न्यूनतम १८ वर्षदेखि अधिकतम २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार स्याङ्जा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाको इजलासले जबरजस्ती करणी गरी कसुर गरेको पुष्टि भएको फैसला गर्‍यो । फैसलामा भनिएको छ- यसमा जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, पीडित परिवर्तित नाम ‘०७६ आँधीखोला १’ ले मौकामा गरेको घटना विवरण कागज, पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, घटना विवरण कागज गर्नेले मौकामा गरेको घटना विवरण कागज, मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी मदन माझीले अभियोग दाबी बमोजिम मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(१) विपरीत दफा २१९ (२) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको ठहर्छ ।’
त्यसैगरी फैसलामा भनिएको छ ‘…मिसिल संलग्न आधारहरूलाई मध्यनजर गरी प्रतिवादी मदन माझीलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ख) बमोजिम १८ (अठ्ठार) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । पीडितले प्रतिवादीबाट सोही संहिताको दफा २२८ बमोजिम रु.५०,०००।- (पचास हजार) क्षतिपूर्ति भराइलिन पाउने ठहर्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीले रु.२२००।- (दुई हजार दुई सय) रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने ठहर्छ ।’
छोरा जेलमा, आमाको मृत्यु, किशोरीको आत्महत्या
मदन माझीको घर ।
सौतेनी आमा र दिदी पर्नेले ती नानीलाई लिएर आएको देखेर आफूले कहाँ हिंडेको साँझको बेला भनी सोध्दा मदनसित बिहे गराइदिन ल्याएको भन्ने जवाफ पाएको मदनका ठूलोबुवा इन्द्रबहादुर माझी बताउँछन् ।
‘राति ती नानीलाई लिएर आएका थिए । हामीले नानीलाई राजी छौ भनेर सोध्यौं उनले छु भनिन्’ इन्द्रले भने, ‘गाउँले मिलेर भित्र्याइयो, तर हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन कि बालविवाहको यस्तो मुद्दा लाग्छ भन्ने । अहिले त हामी सबै अचम्ममा छौं ।’
‘हाम्रो छोरो अन्यायमा परेको छ भनेर धेरै ठाउँमा हारगुहार गरियो तर कतैबाट न्याय पाउन सकिएन’ इन्द्रले भने यस्तो होला भन्ने भएको भए किन उनलाई भित्र्याउँथ्यौं र ? आज यस्तो देख्नुपर्‍यो, भोग्नुपर्‍यो । हाम्रो समुदायमा यो अचम्मकै घटना भयो ।’
ज्याला मजदूरी गरेर परिवार पाल्दै आएका स्याङ्जा भीरकोट नगरपालिका १ जगतपुर बस्ने ती किशोरीका बुवालाई हामीले घटना सम्बन्धमा सोध्यौं । उनले भने, ‘हाम्रो परिवारमा ज्याला मजदूरी नगरी खान पुग्दैन । ऊ हिंडी, त्यसपछि के भयो मलाई थाहा छैन ।’
छोरालाई अठार वर्ष जेल सजाय भएको खबर पाएपछि बिरामी आमा झन् झन् थला परिन् । घर खर्च जुटाउन, बिहान बेलुकाको छाक टार्न समुदाय र आफन्तले केही समय सहयोग गरे । बिरामी ती आमालाई माइतीले लगेर करीब दुई महीना रेखदेख गरे अन्ततः सन्तान पीडाले सुकेकी आमालाई ‘दैव’ले लग्यो ।
यसपछि ती किशोरीले वालिङ नगरपालिका-६ दमैटोलका एक युवकसँग विवाह गरिन् । कसैले प्रहरीमा उजुरी नगरेकोले यो विवाह गर्ने युवक पक्राउ परेका थिएनन् । तर यसैबीच ३१ भदौ २०७८ का दिन तिनै युवकको घरमा बाँसको बलोमा पासो लगाएर ती किशोरीले आत्महत्या गरिन् ।
सीमान्तकृत माझी जातिमा धेरैजसो विवाह १६ देखि १८ वर्षको उमेरमा हुने गर्छ । अहिले पनि यो समुदायमा यो उमेरमा विवाह भैरहेका छन् । यस्तोमा कसैले उजुरी नगरेसम्म कोही जेल जानु पनि पर्दैन ।
वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणलाई यो घटनाले बिखलवन्दमा पारेको छ । उनका भनाइमा, यो कानूनतः कसुर हो केही भन्न मिल्दैन । तर माझी समुदायभित्र यसलाई अहिले पनि कसैले कसुर मान्दैन । सानै उमेरमा विवाह गर्नु यो समुदायभित्र आम प्रचलन हो ।
‘प्रहरी र अदालतका कर्मचारीले सरकारवादी मुद्दामा सफलता पाएको भनेर यस्ता मुद्दाको अभिलेख राख्छन्’ नगर प्रमुख खाँण भन्छन्, ‘तर यसबाट अबोध माझीहरू, चेतनाको कमी भएको जातिप्रति ज्यादती भइरहेको छ । अव्यावहारिक कानून लगाएर एउटा निरीह मानिसलाई अपराधी बनाइएको छ । यस्ता मामिलामा अब बहस हुनुपर्छ ।’
यस्ता घटना बाहिर आउन थालेपछि वालिङ नगरपालिकाले सामाजिक स्तरमा कानूनको चेतना कम भएका विशेषगरी सीमान्तकृत जातिहरू, दलित समुदाय, पिछडिएको समुदायलाई लक्षित गरी नगरपालिकाले यसै वर्षबाट कानूनी साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी दिनमा यसप्रकारका घटना दोहोरिन नदिन नगरपालिकाले आवश्यक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने नगर प्रमुख खाँण बताउँछन् ।
मदन माझीको पक्षबाट अदालतमा बहस गर्ने अधिवक्ता प्रकाश अर्याल उक्त घटनामा अनुसन्धान पक्षको कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ती किशोरीलाई मदनसित बिहे गराइदिनेहरूले नै बिहेपछि बालविवाहमा परिन्छ भन्ने डरले जबरजस्ती करणीको मुद्दा चलाइदिएको देखिन्छ ।’
कानूनतः यो बालविवाह थियो तर व्यवहारमा मदनसँग विवाहपछि पनि ती किशोरी राजीखुशी बस्न तयार हुँदा पनि कानूनको सुविधा प्रयोग गरेर जबरजस्ती करणीको मुद्दा हाल्न लगाइएको देखिएको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
यसप्रकारका घटना न्यूनीकरण गर्न कानूनी साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तीन वटै सरकार, सरोकारवाला निकायहरूले पटक/पटक यस्ता घटना दोहोरिरहेका समुदायमाझ जनचेतना जगाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसरी कानूनी अज्ञानताकै कारण स्याङ्जाको यो गाउँमा बालविवाह भयो, युवक जेल परे, छोरालाई १८ वर्ष कैद सजाय भएको थाहा पाएर बिरामी आमा चिन्ताले बितिन् । युवक जेल परेपछि किशोरीले गरेको दोस्रो विवाह पनि सफल भएन । अनि उनले आत्महत्या गरिन् । यो शृंखलाले कानून निर्माता र समाजलाई एकपल्ट निधार खुम्च्याएर सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
मंसिर २३, २०७८0comment
by नागरिक टुडे कार्तिक २९, २०७८
हरिबोधिनी एकादशीलाई एक वर्षभरमा पर्ने चौबीस वटा एकादशीहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण एकादशीको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले सामान्य बोलीचालीको भाषामा यसलाई ठूलो एकादशी पनि भनिन्छ । चार महीनाअघि अर्थात् आषाढ शुक्ल एकादशीको दिनमा आ-आफ्नो घरमा रोपिएको तुलसीलाई आजको दिन मठ सिंगारेर विशेष पूजा गरी विष्णु भगवानका अर्का रुप पीपलसँग विवाह गरिदिने परम्परा रहिआएको छ । आजको दिन सखरखण्ड, पिंडालु आदि कन्दमूल र फलफूल भगवान विष्णुलाई चढाएर प्रसादको रुपमा खाने गरिन्छ ।
हरिबोधनी एकादशीको दिनमा नेपालका विभिन्न धार्मिक स्थलहरुमा मेला लाग्ने गर्छ । यस दिन सुनसरीको बराह क्षेत्र र काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ लगायत उपत्यकाका चार दिशामा रहेका चार नारायण मन्दिर चाँगुनारायण, विशंखुनारायण, इचंगुनारायण र शेष नारायणमा विशेष मेला लाग्छ । हरिबोधनी एकादशीको दिन काठमाडौंका बूढानीलकण्ठ र नागार्जुन नगरपालिकाले आज सार्वजनिक विदा दिएका छन् । यसैगरी हरिबोधनी एकादशीको अवसरमा संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका, खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले पनि कात्तिक २८ र २९ गते दुई दिन सार्वजनिक विदा दिएका छन् ।
हरिबोधनी एकादशीलाई भगवान विष्णुको उपासना गर्ने पर्वको रुपमा लिइन्छ । हरेक एकादशीको दिनमा उपवास बसी भगवान विष्णुको आराधना गरिन्छ । हिन्दू धर्मग्रन्थहरुमा तुलसी, पीपल, दुबो र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीकको रुपमा मानेर पुजिन्छ ।आषाढ शुक्ल एकादशीको दिनबाट भगवान विष्णु क्षीर सागरमा सुत्ने र कात्तिक शुक्ल एकादशीको दिनमा उठ्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ भने कात्तिक शुक्ल एकादशीलाई हरिबोधनी एकादशी भनिन्छ ।
कार्तिक २९, २०७८0comment
छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना
by नागरिक टुडे कार्तिक २३, २०७८
हिन्दुहरुको पर्व छठको दोस्रो दिन आज व्रतालुहरू खरना गरिरहेका छन् । कडा बिधिबिधान तथा धार्मिक नियम पूर्वक जनविश्वासका साथ मनाइने चार दिवसीय आस्थाको पर्व छठ हिजो सोमबारदेखि शुरु भएको हो । हिन्दु धार्मिक मान्यताअनुसार छठ वर्षमा दुई पटक कार्तिक र चैत्रमा अत्यन्तै निष्ठापूर्वक मनाइन्छ । कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीका दिनदेखि शुरु हुने सूर्य उपासनाको पर्व छठलाई तराई मधेस तथा मिथिलांचलमा महापर्व पनि भनिन्छ ।
लोक पर्व छठको आज दोस्रो दिन व्रतालुहरू नुहाइ धुवाइ गरी शुद्ध भई पूजाका सामग्री तयार गरी रहेका छन् । छठ व्रत गर्ने व्रतालु​ महिला तथा पुरुषहरूले हिजो चोखो अरवा चामलको भात, चना,रहरको दाल, फर्सी, लौकाको तरकारी खाएर छठ पर्व सुरु गरेका हुन्। छठपर्वको पहिलो दिनलाई नहाए खाए भनिन्छ ।
दोस्रो दिन आज खरनामा व्रतालुहरू बिहानैदेखि निर्जला रही बेलुका नयाँ माटोको चुल्होमा प्रसादको रुपमा साठी धानको चामल र गाई भैंसीको दुधको खीर र गहुँको पिठोको रोटी पकाई छठी मातालाई चढाउछन् । र त्यही प्रसाद खाने गर्दछन् । त्यसपछि ब्रतालुहरु ३६ घण्टा लामो निर्जला पानी समेत नखाएर निराहार व्रत शुरु हुनेछ । छठ पर्व अन्तर्गत भोलि बुधवार बेलुका अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिइने र पर्सिपल्ट बिहीवार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई विधिपूर्वक अर्घ दिएपछि चार दिनको छठ विधिवत रुपमा सकिन्छ ।
कार्तिक २३, २०७८0comment
छठ पर्व विधिवत् शुरु, आज ‘नहाय-खाय’
by नागरिक टुडे कार्तिक २२, २०७८
मिथिला क्षेत्रमा छठ पर्वको रौनक छाएको छ । सूर्य उपासनाको महापर्व छठका तयारीमा मिथिला क्षेत्रका जनजन परिचालित देखिँदा छन् । पर्वको प्रारम्भ व्रतालुले आज ‘नहाय-खाय’ विधिबाट गर्दैछन् । यसो त कात्तिक शुक्ल तृतीयाकै दिन व्रतालुले उसिनेको चामल, कोदो, मुसुरो, माछा मासुसहित तामसी र राजसी भोजन परित्याग गरी ‘अरबा-अरबाइन’ भनिने विधि आइतबार नै सुरु गरेका हुन् । निरामिष (साविक) भोजन सुरु गरेर तृतीयाकै दिन व्रत विधि सुरु हुने पर्व परम्परा छ ।
छठ प्रारम्भसँगै मिथिलाका धार्मिक महत्वका तलाउ र नदी परिसर बेहुलीझैँ सिङ्गारिएका छन् । पर्वमा महिला÷पुरुष जसले व्रत गरे पनि हुने विधान (शास्त्रीय मत) भए पनि धेरैजसो घरको मुख्य महिलाले नै व्रत सङ्कल्प गर्ने गरेका देखिन्छ । पर्व सुरु भएको मानिने आज कात्तिक शुक्ल चौथीका दिन व्रतालुले पवित्र स्नान गरी व्रत सङ्कल्प गरेर चोखोनितो खानेछन् । यो विधिलाई मिथिलामा ‘नहाय-खाय’ भन्ने गरिएको छ । पर्वले घरघरमा व्यस्तता बढाएको छ । पूजा सामग्रीको जोरजाम र व्यवस्थापनमा सबै केन्द्रित देखिँदा छन् ।
आइतबार (कात्तिक शुक्ल तृतीया) का दिन ‘अरबा-अरबाइन’ र आज (चौथी तिथि) ‘नहाय-खाय’ विधि गर्ने व्रतालुले भोलि कात्तिक शुक्ल पञ्चमीका दिन दिउँसभरि निराहार व्रत बसी राति सख्खरमा पकाइएको अरवा चामलको खिर कूलदेवता र छठी देवीलाई चढाएर प्रसादस्वरुप खानेछन् ।
यो विधिलाई मिथिलामा ‘खरना’ भनिन्छ । त्यसपछि षष्ठी तिथिका दिन निराहार व्रत बसेर साँझपख मनोरम घाट बनाइएको जलाशयमा पुगी कम्मरसम्म पानीमा पसेर नुहाएसँगै अस्ताउँदा सूर्यलाई अघ्र्य दिएर प्रसाद राखिएको डाली हातमा उठाएर सूर्यलाई देखाइन्छ । यो विधिलाई ‘सझुका अरख’ वा ‘सँझियाघाट’ भनिन्छ । यसरी ‘सझुका अरख’ मा देखाइएको प्रसाद सामग्रीको डाली सप्तमीका दिन बिहानै उदाउँदा सूर्यलाई अघ्र्य दिएर देखाइएपछि छठ पर्व सम्पन्न हुने परम्परा छ ।
मिथिलामा ‘सझुका अरख’ सम्पन्न गरेर घाटमै बस्ने र सप्तमीका दिन बिहान सूर्योदय हुन एक घडी अघिदेखि पानीमा चोबलिएर व्रतालुले गीतको भाखामा सूर्यदेवलाई चाँडै देखिन पुकारा गर्छन् । सबैजसो घाटमा रातभरि जाग्राम बस्न गीत, सङ्गीत, नाटक र मनोरञ्जनका अन्य साधन व्यवस्था गरिन्छन् । केही दशकअघि मिथिला र तराई क्षेत्रको मात्र मुख्य पर्व मानिने छठ अब नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पर्व नै बनिसकेको छ । पहाड, मधेसको सांस्कृतिक घुलमिलले छठपर्व अब साझा पर्व बन्दै गएको यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी बताउँछन् । जनजन परिचालित हुने यो पर्व मिथिला संस्कृतिको अभिन्न अङ्गका रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।
कार्तिक २२, २०७८0comment
कार्तिक १६, २०७८0comment
मंगलबारको दिन गर्नै नहुने ३ काम :
आज मंगलबार, हिन्दु बैदिक ज्योतिषशास्त्र अनुसार ग्रहका आधारमा बार र तिथिहरुलाई विभाजन गरिएको हुन्छ ।शास्त्रका अनुसार मंगलबार तथा शनिबार क्रुर अर्थात पापी बारको श्रेणीमा पर्छन् । मंगलबारलाई अत्याधिक क्रुरबार मान्दै शास्त्रमा यसलाई शरीरमा रक्त सञ्चार गराउने धमनीसँग सम्बन्धित मानिएको छ ।मानिसको शरीरमा हुने रातो पदार्थ मंगलसँग सम्बन्धित मानिन्छ । मंगलबारलाई सबै ग्रह मध्ये क्रुर र रक्तपातको ग्रह मानिएको छ । मंगलको रातो रंग मृत्यु वा रगत सँग हुन्छ । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न ३ काम गर्नै नहुने अर्थात बर्जित गरिएको छ ।यी काम मंगलबार गर्दा तपाइँको जीवनमा समस्या बढ्न सक्छन् ।
माछा, मासु सेवन नगर्नेःमंगलबारको दिन तपाईले माछा नखाएकै राम्रो हुन्छ । आजको दिन माछा सेवन गर्दा आर्थिक नोक्सा हुन सक्छ भने मंगलबार मासु खाँदा पनि कुटुम्बको क्षय हुन्छ ।
पशु पन्छीको बलि नदिनेःमंगलबारको दिन पशु बलि दिने कार्यलाई अत्यन्तै खराब मान्ने गरिन्छ । यस दिन काटमार नगरेकै उचित हुन्छ । यदि काटमार गरेको यसले सन्तानमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । त्यस्तै मंगलबार कुखुरा वा अन्य प‌ंक्षीको हत्या गर्दा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुने मान्ने गरिन्छ ।
मदिरा सेवन नगर्नेःतपाईले मंगलबारको दिन मदिरा सेवन गर्दै आइरहनुभएको छ भने त्यो पनि त्याग्नुपर्छ । मंगलबारको दिन मदिरा सेवन गर्दा तपाइँको क्रोधमा वृद्धी हुन्छ जसले अपराध समेत बढाउँछ । मंगलबार झगडा गर्दा बेइज्जत हुने विश्वास गरिन्छ ।
भाइटीकाको साइत ११ बजेर २ मिनेटमा
by नागरिक टुडे कार्तिक १५, २०७८
भाइटीकाको साइत ११ बजेर २ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ । विकास समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलले यस वर्षको भाइटीकाको साइत यही कात्तिक २० गते बिहान ११ बजेर २ मिनेटमा रहेको जानकारी दिएका हुन् । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दशैं र भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
कार्तिक १५, २०७८0comment
श्रीमती र छोरी हत्याको आरोपमा धामी पक्राउ
विराटनगर । श्रीमती र छोरीको हत्या आरोपमा प्रहरीले इलाममा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।
इलामको देउमाई नगरपालिका– ५ बारुङका ३३ वर्षीय कमल तामाङले झारफुक गर्ने क्रममा आफ्नै श्रीमती र छोरीको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मंगलबार बिहान ६ बजे तामाङ घरभित्र धामी बसेका थिए । श्रीमती ३४ वर्षीया सीता तामाङ र छोरी १६ वर्षीया शिक्षा तामाङको झारफुक गर्ने क्रममा घाँटी तथा शरीरको विभिन्न भागमा टोकेका र उनीहरुको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।
घटनाको जानकारी पाएलगत्तै अस्थायी प्रहरी चौकी गजुरमुखीधामबाट पुगेको प्रहरी टोलीले तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
सुर्खेतबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रु बसमा धादिङको गजुरीमा आगलागी भएको छ । ना ६ ख १४७१ नम्बरको यात्रु बसमा आज बिहानपख २ बजे आगलागी भएको हो । गजुरी बजारमा गुडिरहेको बेला बसमा एक्कासी आगलागी भएको धादिङ प्रहरीले जानकारी दिएको छ । बसमा पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।
बसमा सवार यात्रुहरु भने सकुशल छन् । यात्रुका केही लगेज पनि जलेको छ । बसभित्र धुँवा देखिएलगत्तै चालकले बस रोकेर यात्रुहरुलाई बाहिर निकालेका थिए । त्यसैले मानवीय क्षति हुन नपाएको प्रहरीको भनाइ छ । बसमा लागेको आगो प्रहरी र स्थानीय मिलेर निभाएका थिए । बसमा आगो लाग्नुको कारण खुलेको छैन । यद्यपि बसभित्र गरिएको वायरिङमा सट भएर आगो लागेको हुनसक्ने अनुमान छ ।
कार्तिक ७, २०७८0comment